Point Break (1991) | MM Movie Store
1991 မှာရိုကျခဲ့တဲ့ Point Break ဇာတျကားမှာတော့ငယျရှယျပြိုမွဈတဲ့ Keanu Reeves ရဲ့ စှနျ့စားခနျးတှကေို မွငျတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ…
အခုမှ အလုပျထဲ စဝငျခါစ … သငျတနျးသားဘဝမှာ အကောငျးဆုံးရမှတျတှနေဲ့အကျဖျဘီအိုငျအေးဂငျြ့တယောကျဖွဈတဲ့ အသကျ ၂၅ နှဈအရှယျ ဂြှနျနီယူတာ ဟာဘဏျဓားပွတိုကျမှုတှကေို စုံစမျးတဲ့ ဌာနမှာ စတငျတာဝနျထမျးဆောငျရတယျ….
အဲ့ဒီအခြိနျတိုကျဆိုငျတယျပဲပွောရမလားပဲ…အမရေိကနျသမ်မတဟောငျး မကျြနှာဖုံးတှကေို စှပျပွီးဘဏျတှကေို ဓားပွလိုကျတိုကျတဲ့ အကွီးစားအမှုကွီးဖွဈခဲ့တယျ….စနဈကလြှနျးတဲ့ လှုပျရှားမှုတှနေဲ့အတူ အတှအေ့ကွုံတှမြေားလှနျးတဲ့ ဘဏျဓားပွအဖှဲ့ဟာအခြိနျတိုအတှငျး လှုပျရှားနိုငျခဲ့တာမို့ ရဲဌာနတဈခုလုံး ခေါငျးမီးတောကျနတေယျ…
သဲလှနျစ ဆိုလို့လောကျလောကျလားလားမကနျြခဲ့….ဒီအဖှဲ့ရလှောလှိုငျးစီးသမားတှဖွေဈနိုငျတယျဆိုတဲ့ ထငျမွငျခကျြသဲ့သဲ့လေးပဲကနျြခဲ့တယျ..အဲ့ဒီနောကျ ဂြှနျနီယူတာဟာ ပငျလမျးကမျးခွမှော အသှငျယူရငျး တဈဖှဲ့လုံးကို ဖမျးဖို့ကွိုးစားပါတော့တယျ…
1991 မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ Point Break ဇာတ်ကားမှာတော့ငယ်ရွယ်ပျိုမြစ်တဲ့ Keanu Reeves ရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
အခုမှ အလုပ်ထဲ စဝင်ခါစ … သင်တန်းသားဘဝမှာ အကောင်းဆုံးရမှတ်တွေနဲ့အက်ဖ်ဘီအိုင်အေးဂျင့်တယောက်ဖြစ်တဲ့ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဂျွန်နီယူတာ ဟာဘဏ်ဓားပြတိုက်မှုတွေကို စုံစမ်းတဲ့ ဌာနမှာ စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်….
အဲ့ဒီအချိန်တိုက်ဆိုင်တယ်ပဲပြောရမလားပဲ…အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း မျက်နှာဖုံးတွေကို စွပ်ပြီးဘဏ်တွေကို ဓားပြလိုက်တိုက်တဲ့ အကြီးစားအမှုကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်….စနစ်ကျလွန်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူ အတွေ့အကြုံတွေများလွန်းတဲ့ ဘဏ်ဓားပြအဖွဲ့ဟာအချိန်တိုအတွင်း လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့တာမို့ ရဲဌာနတစ်ခုလုံး ခေါင်းမီးတောက်နေတယ်…
သဲလွန်စ ဆိုလို့လောက်လောက်လားလားမကျန်ခဲ့….ဒီအဖွဲ့ရေလွှာလှိုင်းစီးသမားတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ထင်မြင်ချက်သဲ့သဲ့လေးပဲကျန်ခဲ့တယ်..အဲ့ဒီနောက် ဂျွန်နီယူတာဟာ ပင်လမ်းကမ်းခြေမှာ အသွင်ယူရင်း တစ်ဖွဲ့လုံးကို ဖမ်းဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်…